IMPERATA BARON CASAAN CYLINDRICAL: BEERITAANKA IYO DARYEELIDDA DHIRTA EE BANNAANKA U FURAN - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo abuuro loona kobciyo halyeeyga cylindrical
Si aad u qurxin aagga beertaada, dhirta aan qabin ayaa ah ta ugu fiican. Waxay si fudud u u dulqaadanayaan xaaladaha cimilada kala duwan, waxay leeyihiin dhammaan noocyada sifaha qurxinta, awoodda si dhakhso ah u koraan uguna guuleystaan ​​qaybo horay loo qorsheeyay. Imperata cylindrical (Imperata cylindrica) kala duwan "Red Baron" waxay buuxisaa shuruudahan oo dhan.
Tani waa warshad dil ah oo ka mid ah qoyska badarka. Dhererkoodu wuxuu qiyaastii 30 cm (mararka qaarkood ilaa nus mitir), asliga ahi waa ciriiri, caleemuhu waa dhuuban yahay, adag yihiin, oo si ba'an loo habeeyay, oo leh talooyin calaamado ah.
Guryaha qurxinta ee cawska waxaa lagu bixiyaa midabada aan caadiga ahayn ee caleemaha: marka ay da'da yaryar yihiin cagaar dhalaalaya oo saldhigiisu casaan yahay, casaankuna waa casaan, laakiin xilliga dayrta midabka jilicsan ee khafiifka ah wuxuu daboolayaa dhammaan saxanka, sababtoo ah dhirta waxaa mararka qaar loo yaqaan "iftiin casaan" ama, asal ahaan asal ahaan Asia, cawska dhiigga ah. "
Boqorku wuxuu u muuqdaa mid aad u qurux badan xilliga ubaxyada, sidoo kale, marka ay soo saarto qalab casri ah oo leh 10-3.5 cm dhejis madow oo midab leh oo muuqaal ah oo u muuqda mid ka soo horjeeda asalka caleemaha cas.
In duurka, waxay dhacdaa guga. Laakiin leh beerista macmalka ah ubax, waxaa suurtagal ah in la gaaro aad u dhif ah, kiis kasta, ma shaqeyneyso sanad walba.
Baro nuucyada koritaanka cawska sida ornamental sida Shaygada Shiinaha, Canarya, Pike sodkorta, foxtail cagaaran, citronella.
Khubarada, haddaba, kuma talin inaad ku tiirsanaato hannaan isdaba-xiiran ah markaad qorshaynayso qaababka muuqaalka. Laakiin tani ma aha dhibaato gaar ah, sababtoo ah dhirtu waxay u egtahay muuqaal aad u cajiib ah iyada oo midabkeedu yahay midabka midabka leh ee caleemaha.
Dalkan "Red Lightning" waa qaybta koonfur-bari ee Aasiya (Kuuriya, Shiinaha, Japan). Hase yeeshee, awoodda ay u leedahay inay si dhakhso ah u koraan, cawska ayaa hadda si ballaadhan loogu qaybiyaa meel kasta oo adduunka ah halkaasoo cimiladu ay tahay mid diiran.
Haddii wadamada yurubiyaanka "Red Lightning" ay tahay qayb ka mid ah naqshadda naqshadaynta muuqaalka, ka dibna Maraykanka u ah cawska cawsku waa mid dhab ah iyo duufaan beeralayda maxaliga ah. Tani waxay udub dhexaad u tahay (dadka Maraykanka ah ayaa ugu yeeraya cawska kogonovuyu) isla markiiba waxay qaadataa qashin iyo gabbasho, qulqulaha dabayshu waxay ku faafaan geesaha waddooyinka wadooyinka iyo barakacayaasha kale ee cowska.
Warshadu waxay gabi ahaanba aan ku habooneyn in la isticmaalo sida quudinta labada xayawaanka duurjoogta ah iyo xayawaanka beeraha sababtoo ah aad u fiiqan. Waxay sidoo kale ka dhigaysaa meel aan macquul ahayn meelaha shimbiraha badan.
Ma taqaanaa? Aborigines aborigines ee jasiiradda New Guinea waxay heleen isticmaalka wax ku oolka ah ee loogu talagalay imperator. Waa la qalajiyey waxaana loo isticmaalaa in lagu daboolo saqafka guryaha. Sida la ogyahay, cawska qalalan waxaa loo isticmaalaa maadada dushiisa ee Europe kaliya illaa dhamaadka qarniga 19-aad, laakiin gudaha Oceania, iyo sidoo kale dalalka Aasiya, Afrika iyo Latin America, qaabkani si wanaagsan ayaa loo isticmaalay illaa hadda.
Waa in sidoo kale lagu sheegaa in dalalka kulaalayaasha "Red Lightning" sida caadiga ah ay gaaraan heerar ka sarreeya marka loo eego aagagga diimeed, iyagoo gaaraya ilaa 80-90 cm.
Jaantuska 'jacayl dhab ah ee Red Baron waa sahlan tahay inuu sharaxo. Cimiladan dhalaalaya waxay u muuqataa mid aad u fiican labadaba kooxo iyo hal isticmaalka.
Caleenta cas-cas-cas waxay si aad ah u soo jiidaneysaa goobta, keeneysa qoraallo qurux badan oo aan caadi ahayn ee sawirka guud ee sii jiraya ilaa dayrta goor dambe, marka badanaa dhirta ayaa yaraaday oo dhacay. Ka taxadar inaad u tagto boqoradda haddii aad rabto in aad qurxinayso aag yar, gaar ahaan si fiican oo leh caawimaad aad ku garaaci karto qaabka beerta Japan.
"Laydh casaan" waxay si guul leh ugu farsameeyeen cawska oo si fiican loo qaboojiyey, oo ka soo horjeeda cawska dhoobada. Sariirta ubaxa waxay sidoo kale si toos ah loola qabsan karaa jasiiradaha cagaarka quruxda leh ee casaanka leh.
Baro wax badan oo ku saabsan sida loo abuuro cawska, sida loo doorto cawska, iyo sida loo isticmaalo cawska cawska.
Maaha wax yar oo xiiso leh in lagu daro cylindrical cylindrical leh cirbado cadaan ah, gaar ahaan hoos gooyey (tusaale, juniper). Xiniinyaha qoyan ee caadiga ah iyo cagaarka buuxa oo buuxa ayaa sidoo kale si wanaagsan ula qabsada "Red Baron".
Imperata cylindrical waxay u muuqataa mid isku dhafan oo ay la jajaban yihiin geedaha casri ah sida heather, elderberry, hawthorn, weigela, lilac, forsythia, euonymus, rosemary duurjoogta iyo abelia.
Iskudhafka Classic leh dhiig leh afkoda abuuro:
qaababka kala duwan ee barberry;
jasmaalka huruuda ah;
siriyaal kala duwan oo samafal ah (aan lahayn casaan, laakiin dhalaalaya dhalaalaya);
oo cawsduur buu ahaa,
Pike (ama lugovik);
taageere (ama xaasidnimo).
Aag gooni ah oo gaar ah waa qurxinta iyadoo la adeegsanaayo "Red Baron" oo ah barkad dabiici ah. Xitaa adoo adeegsanaya dhirta asalka ah, waxaad si aad u qurxan u qurxin kartaa bouquets cusub ama u isticmaashaa qalabka qallalan-midabada leh si aad u qurxin karto gurigaaga muddada dheer ee jiilaalka.
Daryeelka iyo dhirta sii kordhaya waxay sameyneysaa adiga
Way fiican tahay in guryaha quruxda leh ee quruxda badani hudheelka yahay mid aad u fudud in la joogteeyo oo gabi ahaanba aan la qabin. Intaa waxaa dheer, in ciyaalkayagu, ma laha hantida si ay u koraan si firfircoon, qabashada aag cusub. Tan macnaheedu waa in la beeray iyadoo aan cabsi laga qabin qaddarka dalagyada deriska ah.
Iyadoo la tixgelinayo asalka geedka, xaaladaha ugu fiicani waxay ku jirtaa qadar badan oo iftiinka iyo kuleylka. Qeybta koonfureed ama dhinaca galbeed ee qorshaha ayaa ugu fiican ujeedadaas.
Penumbra waa la ogol yahay, si kastaba ha ahaatee, si ay u noqoto inuu si buuxda u muujiyo tayada qurxinta, ugu yaraan dhowr saacadood maalintii maalintaas waa in ay iftiimiso iftiinka qoraxda.
Waa muhiim! Iyada oo qadar qancis ah oo qorraxda, caleemaha cylindrical waajibka ah ma helin midabka casiir-khamri, taas oo loogu talagalay, oo si adag u hadlaya, waxaa la beeray on goobta.
Sida nidaamka heerkulka, Red Baron waxay dareemeysaa ugu fiican inta u dhaxaysa +22 ilaa +27 ° C Caadi ahaan, "Red Lightning" waxaa lagu koray dhul furan, laakiin beeritaanka weelasha ayaa sidoo kale lagu dhaqmaa (gaar ahaan doorashadan waxay ku haboon tahay meelaha cimilada qaboobaha ah, halkaas oo geedo qabow ay aad u daran yihiin cawska Jarmalka ee kuleylka leh).
Halbeegga ciidda "Red Baron" ma soo rogin shuruudo aad u sareeya. In duurka, cawska wuxuu jecel yahay carrada ciidda iyo xataa dhagaxyada, laakiin waxay ka jawaabi doontaa ciidda bacrin ah iyo hodan ku humus leh mahad weyn.
Fursad wanaagsan waa digaamid ama sanduuqa sanduuqa, acidity waa wax yar acidic ama dhexdhexaad ah (heerka pH ee kala duwan ee 4.5-7.8). Waxyaabaha ugu muhiimsan ee beerashada guul leh ee cylindrical imperata waa in la hubiyo dheecaan wanaagsan si looga hortago joojinta qoyaan ee nidaamka xididka.
Waxay noqon doontaa mid waxtar leh si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee guryaha iyo nidaamyada bacriminta iyaga, sida ay si madaxbanaan u go'aamiyaan kiimikada ciidda ku taal goobta, sida loohaysto deoxidise, iyo sidoo kale ogaado waxa ay ku xiran tahay iyo sida loo hagaajinayo bacriminta ciidda.
Haddii cawska lagu beeray ciidda bacrin ah, uma baahna quudin dheeraad ah. Sanadaha soo socda, dhif ah (dhowr jeer inta lagu guda jiro xilli sii kordhaya) waxay ku dabaqaan Bacriminta bacriminta macdanta ah ee dabiiciga ah iyo kakan si carrada. Bilowga xilli-ciyaareedka, waxaa lagu talinayaa in diiradda lagu saaro dhirta, iyo dayrta si ay u isticmaalaan compost.
Inkasta oo Boqortooyada guud ahaan aysan u dulqaadan karin kororka ciidda, weli waa lagama maarmaan in ay si joogto ah u waraabiso, gaar ahaan xilliga cimilada. Laakiin cawsku ma soo rogi karaan shuruudo khaas ah oo ku saabsan qoyaanka hawada: way ku kori kartaa xitaa lamadeg!
Waa muhiim! Hubi darajada qoyaanka ciidda agagaarka dhirta (si taxadar leh, si aanay u waxyeeleynin xididada ku taala lakabyada sare ee carrada) adoo qodaya mindi: haddii lakabka dusha sare ee ciidda ay qalalan tahay qoto dheer oo ah 2 cm - "Iftiin cas" waa wakhti biyo ah.
Kala saarista iyo beeritaanka
Qalabka cagaaran ee "Red Baron" waa laga kori karaa abuurka, laakiin dhab ahaantii habka daaqsinta ee faafinta cawska ayaa inta badan loo adeegsadaa - qaybinta baadiyaha.
Habkani wuxuu si firfircoon u isticmaalaa geedka duurjoogta, laakiin xaaladaha cimilada ee dabiiciga ah ee dabiiciga ah iyo kuwa wanaagsan (sida horey loogu soo sheegey, ee koonfurta maraykanka, miraha cawska cawska ee Kogon, oo si tartiib ah u taabanaya dhulka).
Aagga cimilada cimilada, biqilka abuur waa ku yar yahay, waana wax aan fiicnayn in lagu koro cawska ornamental sidan. Si kastaba ha ahaatee, miraha impera cylindrical yihiin ganacsi ahaan loo heli karo. Haddii aad rabto inaad tijaabiso, waxaad si fudud ugu beeran kartaa dhul furan guga dambe. Bukashooyin wanaagsan ayaa suurtagal ah oo kaliya meelaha qorraxdu ka jirto. Ka hor inta beeridda, ciidda waa in la daboolaa si fiican, haramaha iyo burburka waa in laga saaraa, waxoogaa qoyan, ka dib marka taas oo miraha si toos ah loogu dhajiyay dhulka dusha sare iyo rusheeyey sare ee lakabka khafiifka ah ee ciidda qallalan.
Sida ugu dhakhsaha badan caleemaha muuqan, bilaabi waraabiyo. Waa muhiim inaad maskaxda ku hayso in ciidda qallalan ay kuxirto abuurka ma yaraato, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan in la hubiyo in carradu weli qoyan yahay.
Ma taqaanaa? Imperata cylindrical waxay leedahay duri duri, anti-bararka, expectorant, hemostatic, antipyretic iyo tallaalka immunostimulating, taas oo ay tahay taas waxaa loo tixgeliyaa warshad daawo ah ee daawada bari. Tusaale ahaan, dalka Shiinaha, ayaa loo isticmaalaa rhizomes - kuwa la qalajiyay waxaa lagu magacaabaa Baymaogen, oo la dubay daaqado - Maogentian. In Russia, geedo ka mid ah ka mid ah qaar ka mid ah dheellitiro cuntada ee la xiriira alaabooyinka leh waxtarka aan la saadaalin.
Sidoo kale ku dhaqma abuurka abuurka geedo. Xaaladdan, nidaamku wuxuu bilaaban karaa dhammaadka Maarso iyo horraanta Abriil. Haddii loo baahdo, waxaad ku dalban kartaa dukaanka online-diyaarinta-diyaar u ah ee imperata cylindrical.
Si dhakhso ah oo lagu kalsoonaan karo, khubarada ayaa kugula talinaya isticmaalka habkan kor u qaadaya "Laydhka cas". Qaybta daaqa ayaa u ogolaanaysa dhirta dhalinyarada ah ee dhirta lagu qurxiyo si dhakhso ah, iyadoo sii kordhaysa abuurka waa sheeko waqti dheer oo liita.
Qalabaynta leh qaybta simistan ee baadiyaha waa in sidoo kale la sameeyaa sababtoo ah waqti dheer cawska qaangaarka ah wuxuu bilaabmaa inuu koro xariijinta bartamaha, sidaas darteedna lumiyo dhammaan soo jiidashada.
Waqtiga ugu fiicneyn ee nidaamka - guga, marka ciidda qoyan yahay ku filan. Qaangaarka qaangaarka ah waa inuu si taxadar leh u qodaa, isku dayayaa inaanu waxyeeleynin qolka dhulka hoostiisa, ka dib markii uu mindi fiican oo qallafsan (qalabku waa inuu hore u nadiifiyaa) waa in si taxadar leh loo gooyaa qaybo badan oo xidid ah.
Waa inaad marka hore diyaariso god ku haboon dhirta dhalinyarada. Miisaankoodu waa inuu noqdaa qiyaastii 2 jeer ka badan kan xididka leh ee kuuskuusay dhulka (inta badan qiyaastii 20 cm oo qoto dheer iyo qiyaastii dhexroor).
Video: sida loo abuuro dalagyada qurxinta Compost waxaa la dhigay hoose ee ceelkii iyo haddii ciidda ma aha mid bacrin ah, waa bacriminta macdanta kakan. Ha iloobin lakabka dheecaanka.
Waa muhiim! Boqorku waa in si caddaalad ah loo beeraa, sababtoo ah xaaladaha cimilada aan aad u kululayn, waxay si aad ah u koreysaa.
Ka dib markii laayay baadiyaha, ceelku waa la aasay, si fiican u tamped, waraabin badan oo mulched lakabka qaro ee compost. Marka ugu horeysa ka dib markii la beero waa mid aad muhiim u ah in la hubiyo in dhulka uusan qallajin, haddii kale "Cawska Jiiraanka Japan" wuxuu leeyahay fursad yar oo ah inuu xidid ku yeesho meel cusub.
Jiilaalka iyo heerkulka la xidhiidha
Imperata wuxuu leeyahay difaaca barafka oo si weyn u sarreeya ee warshad thermophilic ah. Ukraine, Belarus iyo bartamaha Russia, waxay si fudud u adkeyn kartaa jiilaalka dhul furan xataa iyada oo aan hoy dheeri ah lahayn. Goobaha cimilada dareenka leh, dhirta ayaa si fiican ugu koray weelasha iyo xilliga qaboobaha si loogu soo qaado qolka.
Jaranjir nalalka "Red Light" jiilaalka maahan daruuri. Hase ahaatee waxaad u baahan tahay inaad fahamto in aagga dhexe uusan aheyn dabiiciga dabiiciga ah ee "Cawska Julaaca", sidaas darteed ma jirto wax damaanad ah in uusan dhimanayn xilliga jiilaalka, xitaa haddii aad isku daydo inaad siiso hoy wanaagsan oo ah badarka (ujeeddooyinkan waa ugu fiican isticmaal peat). Intaa waxaa dheer, dhirta aan loo dulqaadan karin qoyaanka ciidda xad dhaafka ah inta lagu jiro tuubooyinka. Sababtani waxay tahay in naqshadayaasha muuqaalka badankood ay marka hore tixgeliyaan "Laydh casaan" sidii geedka sanadlaha ah ee u baahan cusboonaysiinta sanadlaha ah.
In kasta oo xaqiiqda ah in caado-caleen-caleemo-dhaqameedka ah loo tixgeliyo geed aan qabyo ahayn, beerashadooda waxay sababi kartaa dhibaatooyin gaar ah. A la'aanta qorraxda - iyo caleemaha fiiqan diidaan in ay ku dhufan, la'aanta qoyaan - geedka ma qaadan xidid, xad-dhaaf ah qoyaan - waa la dilay.
Si loo xaliyo dhibaatada qoyaanka qoyaanka badan ee siyaabo badan ayaa ka caawiya dheecaan, laakiin waxaa jira xaalado ku tiirsan dadaalka beerta, tusaale ahaan, luminta baadiyaha ka dib jiilaalka qoyan.
Waa muhiim! Haddii dhirta la gooyo caleemo cagaaran oo aan cagaha lahayn, waa in laga saaraa, sababtoo ah waxay haystaan ​​dulqaad badan oo dheeraad ah oo u nugul inay si degdeg ah u koraan, halka ay ka soo jeedaan meel qurxoon oo aragtiduna aanay xiiso lahayn.
Si taxadar leh, daryeelaha baadiyaha wuxuu gaari karaa ugu sarraysa jaangooyntooda sannadka afraad ee nolosha. Laakiin si ay u noolaadaan ilaa da'da this, geedka ma noqon karaan mar walba.
"Red Baron" waa mid u adkaysata cudurrada iyo cayayaanka. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan waa cudurada fungal ee saameeya geedka. Tani waxay sabab u tahay biyaha joogtada ah ee ciidda.
Ka hortagga ugu fiican ee dhibaatadani waa doorasho sax ah oo ah dhul si aad u degto, hubinta in biyaha laga saaro biyaha, haddii ay aad ugu dhow yihiin dusha sare, dheecaan wanaagsan iyo waraabin karti leh.
Haddii uu cudurku ku dhufto dhirta, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daaweeyo fungicides sida ugu dhakhsaha badan (Quadrix, Fundazol iyo wakiilada kale ee antifungal ayaa loo isticmaali karaa). Imperata cylindrical "Baron Baron" wax micno ah kuma laha naqshada muuqaalka.
Ma taqaanaa? Faransiisku waxay ku daraan qalabka cylindrical ee qalabka isboolojiga, gaar ahaan, saabuunta dareeraha ah oo ku salaysan soo saaridda dhirta dhererkeedu si fiican u qoyaan maqaarka, waxay hagaajisaa ciladkeeda, sidoo kale waxay sameeyaa timaha jilicsan oo la maamuli karo.
Waxaa sabab u ah in caws this dekedeed leh jilicsan oo caleemaha fiiqan waxaa loo isticmaalaa farxad inay qurxiyaan sirqoolladooda. Laakiin, iyada oo dhan oo aan qabyo ahayn, dhirta si dhib leh ayaa loogu yeedhaa gebi ahaanba "rif". Kordhinta waxay u baahan tahay xoogaa dadaal ah, laakiin natiijada waa u qalantaa!